Firefox / Chrome: otu esi eme ka nyocha spell na Spanish | Site na Linux
Firefox / Chrome: otu esi eme ka nyocha spell na Spanish
N'ime ọrụ m dị ka onye nhazi nke blọọgụ a (na ọbụlagodi tupu, na Ka Anyị Jiri Linux) ahụrụ m ihe ojoo Nkọwapụta ihe egwu, ma na ederede na ederede, nke gbagwojuru m anya. N'echiche a, echere m na ụdị aghụghọ a nwere ike ịba uru dị ukwuu iji meziwanye asụsụ anyị. Eziokwu gbara ọkpụrụkpụ bụ na n’amaghị etu anyị ga-esi na-akọwapụta onwe anyị nke ọma n’asụsụ anyị, na-eme ka anyị nwee nsogbu.
1 Na Firefox
2 Na Chromium / Chrome
3 Yapa: ihe ndị kachasị emehie
Site na ndabara, a na-ahazi Firefox iji lelee nsụpe na-akpaghị aka. Can nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ atụmatụ a site na ịga Mmasị> Nke di elu> General. Ozugbo e, họrọ nhọrọ Lelee nsụpe ka ị pịnyere.
Etu ị ga-esi mee ka onye anwansị nyocha na Firefox
Mgbe ahụ, ị ​​ga-eji aka nri pịa igbe ederede ị na-ede ma mee ka ịlele nyocha nhọrọ nyocha (ọ bụrụ na agbanyeghị ya). N'ikpeazụ, pịa nri ederede ọzọ wee họrọ asụsụ kwesịrị ekwesị.
Supee Checker Asụsụ Ntọala na Firefox
Ozi ndị ọzọ na akwụkwọ enyemaka nke Mozilla.
Na Chromium / Chrome
1. Pịa na menu Chrome, nke gosipụtara na ogwe ihe nchọgharị.
2. Họrọ Ntọala> Gosi nhọrọ dị elu.
3. Na ngalaba Asụsụ, pịa Ntọala ederede na ntinye ederede.
4. Na dialog Asụsụ, họrọ igbe igbe Kwado idegharị ederede iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ onye anwansị.
5. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji akara anwansị, họrọ asụsụ dị mkpa site na listi ma pịa Jiri asụsụ a maka onye na-enyocha anwansị n'aka nri. Ọ bụrụ na etinyeghị asụsụ ahụ, tinye ya dị ka otu n'ime "asụsụ ndị masịrị gị". Enwere ike asụsụ ị gbakwunye enweghị akwụkwọ ọkọwa okwu na-akọpe afa. Ọ bụrụ otu ahụ, ịgaghị enwe ike iji akara anwansị dị n'asụsụ ahụ.
Supee Checker Nhọrọ na Chromium
Ntuziaka: ma ọ bụrụ na ị na-eji weebụ n'ọtụtụ asụsụ, ị nwere ike ịgbanwe asụsụ ọkọwa okwu ka ị na-ede. Gbalia ihu na asusu ndi a gunyere na asusu a choro ka ha choro Asụsụ. Pịa aka nri pịa igbe ederede ebe ị na-ede ma họrọ Sụpee nhọrọ nlele na asụsụ ị masịrị gị.
Maka ozi ndị ọzọ, ana m akwado ịgụ akwụkwọ enyemaka nke Google.
Yapa: ihe ndị kachasị emehie
1. E kwuru na excelente (ya na "xc"), mba exelente.
2. Haya, Ebe ahụ y kpochapu.
Haya (site na ngwaa nwere): ya mere mmuta ihe puru omume, ị ga-amụ.
Ebe (ebe): nke ahụ bụ karịa Ebe ahụ obi abụọ ọ bụla
Halla (chọta): Gị kpochapu ebe a
3. E kwuru na na-aga (yana "na"), ịgaghị.
4. Chaị y Valle.
Gaa (site na ngwaa ahụ gawa): ka m wee gaba ịga ụlọ akwụkwọ ọ chọrọ mmiri ozuzo
Valla (nke ị wụliri elu): ụnyaahụ m gbara ọsọ 100 m. na fences.
5. Tube y Ọ nwere.
Nwere (site na ngwaa nwere): Ọ nwere pox anụ ọkụkọ
Tube (akpa): tube n'ìhè ya ka ọ n burnedre ere
6. Onye nke abụọ ezughị okè
Olu gi kwuru, i gbara egwu, ị pụọ. Didn't gwaghị, ịgba egwu, ị pụọ
7. N'ihi gịnị - n'ihi na
Why (ajuju):N'ihi gịnị anyi bu ndi Linux? Amaghị m, ọ dịghị onye maara nke ọma ihe mere.
N'ihi na (nkọwa): Anyị dị ka nke a n'ihi na anyị enweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ.
8. Emela - nkuzi mgbamejije
Emechara (site na ngwaa ime): bụ hecho.
Icho (site na ngwaa iji tufuo, putara itu): ebe nkuzi mgbamejije Ahịhịa?
9. Nnukwu y basta
Nnukwu (pụtara "nnukwu"): mpaghara dị oke buru ibu.
Enough (pụtara "ọ dịghị ihe ọzọ"): ¡basta site na ịmehie okwu!
10. Ikpeazụ okwu nke ngwaa conjugated na anyị.
Ọ dị njọ iji "ka anyị kwanyere" ma ọ bụ "ka anyị na-asọpụrụ ibe anyị", ihe ziri ezi na-ekwu bụ "ka anyị na-asọpụrụ ibe anyị."
Ka o sina dị, ụmụ okorobịa, ụmụ nwanyị: Anaghị m arịọ gị ka ị bụrụ Cervantes, ma ọ bụ ọbụna bụrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ngwoolu ma ọ bụ kọma, kama, dị ka enyi ga-asị, "otu akụkụ nke ọdịbendị!"
Agbanyeghị, ị nwere ike ịhapụ echiche gị, itinye ya na echiche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Firefox / Chrome: otu esi eme ka nyocha spell na Spanish
Ihe 90 kwuru, hapụ nke gị
́Ǵǵǵ́ŕá́áázzzzííaasśś x́ t́ú v́ué́n̨a bolúńtá
Jódéŕ tíó qúé ćáńtídád dé tíldéś .. hahaha
Cr30 qu3 n0 func10n4 very b13n p4r4 4qu3ll0s qu3 l3s gus74n 3scr1b1r 3n h4x0r.
Bü € n ınŧ € nŦØ
oke na-enweghị nku dijo
Ọ bụrụ na ha tinye youtube, pịa ebe ọ bụla ma tinye «1337» niile c0m3n74r10z s3 3zcr183n like this
Zaghachi òké na-enweghị ọdụ
Ray I qke kqeria dee aszi
wtf ?? haha
Nke a bụ n'ihi na anyị na-anwale nyocha anwansị Firefox iji hụ etu ọ dị. Ihe adịghị ya bụ imezi onwe ya. 🙂
Nsupe dị mma, ya mere anyị na-aghọta onwe anyị nke ọma.
Ọ dịkwa mkpa ịkpọtụrụ akwụkwọ ọkọwa okwu ahụ, ebe ọ bụ na n'ụlọ anyị, anyị amụtala ịkọwa okwu, mana na ezinụlọ ọzọ, ma ọ bụ n'obodo ọzọ enwere ike ịghọta otu okwu ahụ n'ụzọ ọzọ. Nke ahụ bụ ebe akwụkwọ ọkọwa okwu na-enyere anyị aka: ọ bụ ọkọlọtọ ịgbaso ka anyị niile wee ghọta ibe anyị na-enweghị nsogbu, anyị etolitela ebe ọ bụla, makana nghọta na mkparịta ụka na-amalite site na nkọwa anyị nyere okwu.
Ọ bụ eziokwu ... Akwụkwọ ọkọwa okwu a bụ ezigbo enyi.
N'otu aka ahụ, ọ dị ka ọ dị mma ịkọwapụta onwe m dịka ojiji na omenala nke mba ọ bụla. Amaara m na ụfọdụ na-enye nsogbu na "M dee ihe dị ka onye Argentine." O di nwute, agaghi m agbanwe agbanwe. M na-eguzogide "nnọpụiche Spanish" (ọ bụrụ na nke ahụ dị adị n'ezie).
N'ezie, mmadụ, onye ọ bụla na-ekwupụta ihe ọ masịrị ya ọ bụrụhaala na ọ ghọtara onwe ya 🙂 Abụ m Andalusian na anaghị m agbanwe ihe ọ bụla, ọ bụ etu a ka m siri kwupụta onwe m 😛
Ihe omumu oma di nma 😉 obu ezie na - n’ihi na, wdg. nwere ihe ọ pụtara:
Ọ bụ eziokwu. Dika m na akowa ya na nkowa ozo, obughi echiche inye “ihe mmuta uto” kama inye ntuziaka di nkenke iburu n’uche.
Maazị Linux dijo
Mperi izizi ị mere n’edemede ọ bụla ị bipụtara, aga m abụ onye izizi ga-eme ka ị mara.
Zaghachi Maazi Linux
Kedu ihe okwu a dị? Anaghị m ahụ ihe bụ nsogbu n’akwụkwọ ahụ.
Ụlọ ọrụ Errare Humanum Est.
Onwere ndị nwere nsụpe mara mma ma ghara ịdabere kpamkpam na ndị na-enyocha ọgwụ (ịgwa eziokwu, ha kpọrọ asị iji ya mee ihe).
N’aka nke ọzọ, enwere ndị na-enweghị ndidi nke na ha anaghị echegbu onwe ha ka ha mara ma etupepe ha siri dị maọbụ na o zighi ezi.
Abụọ na Firefox na Iceweasel enwere m aha ndị na-eme anwansị ahazi na Spanish. Yabụ, ọ nwere ike ije ozi iji nwee ike dee nke ọma ma ọ bụghị ịbanye na ntanetị n'ịntanetị maka etu esi akọwa koodu "Hoygan" agwakọtara na "h4x0r" nke dị na Facebook.
Oburu na ichoro imeso anyi dika ndi na-amaghi ihe, nkowa nke ihe kpatara na ezughi oke, ebe inwere ike ihu “ihe kpatara” apughi iji ya mee ajuju. Ihe m na acho ikwu bu na enwere uzo eji ekwu okwu nke oma. Ebe m kwuchara na ọ dị mkpa iji nlezianya kpachapụ anya sụpepe, o zuru.
Amabeghị m ihe mere ị ga-eji zoro aka na ya. 😉
Ndewo Elav, na nihi na anyi nile mehiere nsufu (obuna na gi mehiere ihie z) Ọ bụ naanị ịkpachapụ anya karịa mgbe ị na-ede ihe.
Ọ bụghị n’ezie inye mmadụ ihe ihe. Ọ dị m ka ọ nwere ike ịbụ ezigbo onyinye iji zere ịmehie ọtụtụ ihe n'ọdịnihu. Ihe a bụ ihe m ji bụrụ onwe m imeziwanye asụsụ m.
N'aka nke ọzọ, echere m na ị ga-ekwenyere m na ihe ndị a abụghị "obere" mmejọ nsụgharị nke "enweghị uche." N’ezie, onweghi onye a gụpụrụ ihie ụzọ site n’oge ruo n’oge, mana mgbe AKPỌRỌ ndị a (ọtụtụ n’ime ha bụ ụlọ akwụkwọ elementrị) ugboro ugboro, ha na-ekwu maka ihe dị nnukwu njọ.
Begwa gị eziokwu, ọ dị m ka ịnye “onyinye” ma ọ bụ “mmụta” dị mkpa karịa mgbasa nke Linux na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (ọbụlagodi na nke a dị mkpa).
Nke ahụ bụ mmetụta m. Enwere m olileanya na emeghị m mmejọ ma ọ bụ mejọọ onye ọ bụla.
Ebumnuche nke isiokwu ahụ dị mma, mana m na-ekwusi ike na ị ga-enwekwu nghọta na akọ iji kwuo ihe, kedu nke ọzọ, ị kwenyesiri ike na isiokwu gị ga-eweta esemokwu ebe ọ bụ na n'okwu ikpe ikpeazụ gị ị kwuru okwu akwụna.
N'ịwa gịnị?! Mazi Linux, biko, Pablo abụghị m, ejiri m n'aka nke ahụ.
Site na Chukwu, nke zuru oke nke ndi nwe aja, obu uzo di nfe iji onye ndozi, ya na okwu nke onwe gi ...
Chọrọ imetụ ha aka ...
Ire ọkụ na anya. Apụta m ...
You maghị etu ị ga - esi gbuo onwe gị site na ịde edemede ma kpọọ gị "onyinye magburu onwe ya, nnukwu onyinye!"
N'ihi ya iwe m.
Nke ahụ bụ eziokwu.
Ma ọ bụ contraire, m na! xD
Ọ B NOTGH about banyere inye ihe nkuzi, kama ọ bụ ịmụ, banyere iji kọmputa nke anyị nwere n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ nke ọma.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị chọpụtala ihe egwu dị n'ichi ihe ị nwere? Echere m na obere nkuzi a nwekwara ike ịrụrụ gị ọrụ.
Semicolon ọ bụla dị n’ebe ọ nọ.
Amaghị m ebe ị ga-enweta na m lere gị anya dị ka onye na-amaghị ihe. Ọ bụrụ na i were ya dịka nsogbu, ọ bụ nsogbu gị, ọ bụghị nke m.
N'aka nke ọzọ, a na m enye onyinye CONSTRUCTIVE ka anyị (anyị niile) leba anya nke ọma mgbe m na-ede ihe (M gụnyere onwe m). Nke ahụ bụ ihe akụkụ nke isiokwu a na-ekwu maka otu esi enyere onye nyocha anwansi na Firefox / Chromium aka.
Ebughị m n'uche ide edemede zuru oke banyere iwu mkpoputa, mana inye ndụmọdụ n'ozuzu na okwu m hụrụ nke na-akpata nsogbu.
Ndewo, Mazi Linux. Ci nke ukwuu kisaz ezkrivaz komo laz yamaz. A yama komo llo
«I nwere ike ime ma ọ bụ gbanyụọ»
Ọ bụ ihe nwute na ị naghị eji ọrụ a ọfụma?
Aghọtaghị m. Nwere ike ịkọwa okwu? Daalụ.
You nwere ike ndo, kedụ asụsụ nke ahụ bụ? gaucho? LOL.
Lelee nke a ịbụ blog dị ogologo oge ma ọ dịkarịa ala mụta ịmegharị ngwaa ahụ, nri? ebe ọ bụ na ọ bụghị anyị niile na-enwe obi ụtọ n'ụzọ ndị Argentine si ekwu okwu, n'agbanyeghị na ha na-ezo n'azụ echiche ahụ na ọ bụ nke ochie, ekele.
Ọ bụ n'ihi ihe ngosi Voseo, nke na-ezighi ezi ebe ọ bụ ngbanwe nke nnochiaha na ngwaa na Spanish
Na mmechi o na ede ihe n'uzo ziri ezi
Obi dị m ụtọ ịmara na ọkwa a bara uru.
RAE anabatala "voseo" dika ezigbo ihe zuru oke.
I huru otu osi di nma imuta ihe ohuru?
Worldwa anaghị ebi na Spen.
Agbanyeghi na okwu a bu vos bu ihe nweputara na okwu olu nke sitere na Portuguese.
voçe, na-enweghị ngwoolu na iji cedilla
Ọ bụ conjugated dị ka nke a:
Aga m aga ije
/ / Ị na-eje ije -s
Ọ na-aga ije
Anyị na-eje ije
Na-eje ije -ị / walk na-eje ije -s
Ha na-eje ije
Maka ngwaa nke conjugation nke abụọ na - agwụ na - ma ọ bụrụ mgbanwe mgbanwe ahụ:
Ma ọ bụ eziokwu
N’ebe a na Uruguay anyị anaghị eji nke gị. Anyị na-eji "gị" na ojiji nke atọ conjugation.
Walk na-eje ije.
Ana m ahapụ gị na klas ahụ, mana nke ahụ bụ nzuzu nke okwu gị ...
Ọ dị njọ mmadụ ide ihe ka ha na-ekwu? A na m ekwu na olumba nke asụsụ Argentine, nke a nabatara na asụsụ Spanish, na ị nweghị mmasị na ya obere, naanị ebumnuche gị, mgbe ọ bụla ị kwuru, bụ imegide ya.
Ahh, dịka ịchọrọ, nke voseo na lunfardo dị m nke ọma, agaghị m aga nkọwa iji kpata esemokwu, na nkenke, onye ọ bụla nwere akụkọ ya, ọ gaghị emegide ya, ọ dị mma? ekele.
ha nwere ike iyi gị ihe ị chọrọ
ma ha bụ ezigbo ụdị nke Spanish
Are bụ ajọ cocolito n'ụzọ ihe ụkọ aha na-anabata na ọ dị njọ na nke a ị nweghị ebe ọ bụla. Na-achọ ntutu isi nke akwa na nwoke nwoke.
O yiri m ezigbo post ọ bụ ihe bara ezigbo uru
Agbanyeghị, ugbua m na-ebute esemokwu (ọ bụghị n'ebumnuche) ma nke a dị m ka ọ bụghị ebumnobi nke isiokwu ahụ, n'echiche m ọ bụ naanị otu isiokwu ga - enyere anyị aka nsụgharị anyị, nke dị mma maka anyị niile
"Họrọ" na dịka @Cocolio si kwuo na "ị nwere ike" abụghị ụzọ iji hazie ngwaa, opekata mpe ebe a na Spen anaghị eji ha. Na Argentina (ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ nke South America?) A na-eji ha otu a? Ebumnuche ahụ nwere ekele, belụsọ na enweghị ahịrịokwu dịka: Hoygan hamygos k tal stan? (Nwanyị hojos ahhhh)
xD, iji hazie ngwaa mba, iji jikọta ha, mea culpa
Particularzọ a ka esi ekwu okwu bụ maka ihe ngosi Voseus.A na-eji ya n'ọtụtụ mba ma ọ dị iche na nke ọ bụla n'ime ha.
Lelee njikọ a
Ọ bụghị oge mbụ m natara ụdị nkọwa a na enweghị m ike ikwenye na nnukwu amaghị ihe dị na isiokwu ahụ, ọkachasị na Spain.
A na-eji "voseo" n'ọtụtụ mba na South America (Argentina, Uruguay, wdg) na Royal Spanish Academy nabatara ya.
M hapụrụ gị njikọ agụmakwụkwọ:
Emegharịla "voseo" na "lunfardo."
Ka o sina dị, nke ahụ abụghị ụzọ ị na-esi egosipụta onwe gị, ọ pụtaghị na ọ dị njọ, nri? Ọ dị ka ịsị na Portuguese Portuguese ezighi ezi n'ihi na ọ dịghị ka ihe ha na-asụ na Portugal.
Ana m ekele gị abụọ maka azịza gị!
Na Spain enwere nzuzu kpamkpam n'okwu a.
Amaghị m na RAE na-anabata ya, ị gaghị alakpu ụra n'amaghị ihe ọhụrụ.
Kedu ihe bụ lunfardo? Chere maka amaghị ihe m.
Echere m na ọ bụ ihe ọjọọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ejiri ya, ndo, ọ bụghị nzube m ka ị nwere ike ịhụ site na nkọwa m ịkatọ ma ọ bụ bụrụ "troll"
N’ebe a na Spain ọ bụ maka “gị” ma gwa ndị okenye ma ọ bụ ndị a na-akwanyere ùgwù, a na-ekwu maka gị. Zọ anyị si ekwu okwu site n'iji nnọchiaha "gị" dị ka onye nke atọ (ya / ya).
Nnabata ọzọ maka anyị abụọ 🙂
Lunfardo bụ "ụzọ akwụkwọ" na - ekwu okwu, yabụ.
The "voseo", n'aka nke ọzọ, enweghị ihe ọ bụla metụtara lunfardo ma jiri ya mee ihe n'ozuzu (na mba ndị ahụ). Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ pụtara na ojiji nke «vos» kama «tú», na nsonaazụ mgbanwe na conjugation nke ngwaa: anyị na-ekwu «vos caminás», kama «tú caminas».
N'otu aka ahụ, na Argentina (na Latin America n'ozuzu ya) anaghị eji "ị", mana "gị": kama "ị jere ije," anyị na - asị "ị jere ije."
Na Maracaibo, Venezuela nwekwara "vocea" ma ọ bụ "vosea" (ha gbagwojuru m anya 🙂) Na Cali, Colombia kwa, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị iche. Echere m na ha na-akpọ otu "ọnụ" na ndị ọzọ "pronominal" ma m na-eme ihe n'eziokwu na-amaghị akwụkwọ na agụmakwụkwọ dị iche n'etiti abụọ; Naanị m maara na ha dịtụ iche. Yabụ, ị hụrụ, ọ mara mma ebe niile. Ihe kachasị mma abụghị ịhụ ya dị ka ihe na-adịghị mma kama dị ka ọdịiche ndị na-eme ka asụsụ anyị mara mma. Nke abụọ a na-asụ n'ụwa (mgbe Mandarin) na karịa Bekee (dị ka Wikipedia).
Anyị na-ejikwa ya Paraguay ..
Ha na-akpọrọ m mgbe niile maka Argentine mgbe m dere ụzọ ahụ.
Na ihe m ga-akwụsịli ide n'asụsụ m, Guaraní.
Che aguyje ndeve che anguirû ko post re ..
Gịnị dị na Spanish bụ: Daalụ onye / enyi, maka post.
Ekwuru na Pablo bụ azịza kachasị mma n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụ eluigwe na ala haha ​​ekele
Mara na ụwa anaghị ejedebe na Spain. gwa onwe gị nwoke! naanị na m nwere ike ikwu!
˙ǝʇuǝɯɐʇɔǝɹɹoɔ ɹıqıɹɔsǝ ɐ ɐzuǝıɯoɔ ǝʇuǝƃ ɐl zǝʌ ɐuǝnq ɐun ǝp ısɹǝʌ ɹǝʌ ˙ʇsod lǝ lɐıuǝ פ
Mana nke kwesiri, ntinye dị ka nke ahụ chọrọ. Ọtụtụ mmejọ edepụtara, ọ bụghị naanị na ọkwa mana na nkwupụta. Ike gwụrụ gị.
Na-efu efu, echere m na "ọ bụrụ na ọ bụghị" na "mana" nke ndị mmadụ na-agbanwe na-enweghị isi (ọ bụghị gị mana m / ọ bụrụ na ị gwaghị m, amaghị m) na "nwere" nke na - adị ire mgbe ọ nọchiri ha kwesiri -> ha kwesiri) mana ndi mmadu jiri ya dika otutu (nke adighi adi) nke ngwaa «inwe» (otutu onwu -> otutu onwu)
Ezigbo mma post!
Ị nwetere ya! Ezi onyinye dị mma… ndị ahụ dịkwa oke ọnụ.
ostia, nturu ugo maka post kacha egwu nke afọ hahaha
Haha! Akwa. M hụrụ n'anya. 🙂
Ogologo oge ole ka ị ga-ede nke ahụ?
Zaghachi ka facundokd
Ihe o were m gaa google pegi mere ya 😉
Nke pụtara ìhè. Enwere m olile anya na onye na-enyocha asụsụ nwekwara ike ịba uru mgbe ị na-ede n'isi gị.
Nke mbu, ekenee obodo dum. Achọrọ m ime ka o doo anya na ọ bụghị nzube m ịmepụta esemokwu, n'ezie ụdị post a dị m mma, mana ọ bụ ihe na-emegide m na onye na-enyocha anwansị abaghị uru maka ihe atụ ị tinyere.
Ọ bụ eziokwu. Echeghị m echiche banyere ya.
Agbanyeghị, nke ahụ na-atụle naanị ngalaba ikpeazụ nke post (yabụ ụfọdụ katọrọ ya).
Ekwenyere m kpamkpam na onye edemede nke edemede a. Ọ bụrụ na mmadụ sị na ha chọrọ ka enyere ha aka na ngalaba ọ bụla ma ghara ide ederede nke ọma, ọ ga-esiri ike inyere ha aka. Enwere ndị, ọ dị nwute, ma ọ bụ ihe ọ bụla kpatara ya, enweghị ohere ịga klaasị ma dee n'ezoghị ọnụ. Mana ihe na-atọ ọchị bụ na ha achọghị ịnwa ịde ederede ederede nghọta. N'ezie, ihe dị mkpa bụ ka ị ghọta onwe gị, mana oge ụfọdụ enwere m ike ịgụ ederede nke na-etinyeghị otu kọma ma ọ bụ oge na ederede na-enweghị njedebe. Mgbe mmadụ abụọ na-anwa ịkọrịta ụka anaghị asụ otu asụsụ, mimicry ma ọ bụ mmegharị ahụ dị ezigbo mkpa, mana na antanetị a machibidoro ya iwu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ide, anaghị m ekwu n'ụzọ ziri ezi, mana ọ dịkarịa ala n'ụzọ dị mma, ebe ọ bụ na anyị niile ga-erite uru na nke a. Ndo ma ọ bụrụ na mmadụ were iwe, mana nke ahụ abụghị nzube m.
Nke a bụ ọla m nwere.
Ndi nwe m, enwere nsogbu na Pablo ma obu onye ozo (ahem, mu ka ima atu) choro i hapu ozi putara ihe na ihe o dere? Echeghị m otu ahụ.
You marala etu o si egbu mgbu iji mezie ọtụtụ ihe na-atụ egwu nke ọtụtụ ndị chọrọ biputere? Ma ọ bụ ka njọ, gụọ nkọwa nke ọtụtụ ndị ọrụ yiri ka ha na-ede akwụkwọ ha? Ihe niile na-agara m ebe a, ọ bụghị maka ịgbachitere Pablo, mana maka ikike iru ogo nzuzu karịa 9000, dọọ ya.
Nke mbụ ụfọdụ ọkụ na-ere ọkụ na-ekwu okwu banyere voseo, nke bụ ihe zuru oke, ha nọ n'ụzọ dịka nkwekọrịta nke gringos na-eme na Bekee, ị maara, «m, a bụ m» ... ị nwere ike, ị nwere ike, ị nwere ike. You nwere ike ịbụ ụdị anụ ọhịa dị na ndụ ịchọrọ ịkatọ ụdị okwu ndị a? Nwoke ahụ kwuru na ọ ga-adịrị onye ọ bụla mma, tinyere onwe ya, ụmụ okorobịa anọ na-apụta "mejọrọ" n'ihi na ha chere na a gwara ha amaghị. Ọfọn, ndị nwe m, enwere m obi abụọ na ebumnuche nke post Pablo bụ ịgwa gị onye na-amaghị ihe, mana m kwenyesiri ike na ị na-eme ka amaghị ihe gị site na ịkọwa ihe na-esoghị gị, dịka onye na-ekwu ebe a «onye na-ekwesịghị ọ naghị atụ ya egwu.
Ndi mmọ ẹma ẹyat esịt? Mmiri ara ehi ọjọọ! Anaghị m ahụ ọchịchọ ma ọ bụ ebumnuche nke imejọ ebe a, hapụ uche, na ihe niile a na-ebipụta ugbu a, maka ezigbo akụkụ, na-abụkarị "mkparị", biko, ezughị oke mgbanwe dị otú ahụ.
N'ime + 9000!
Nke a na-echetara m ederede na m hxtara ogologo oge gara aga ma m di nnoo xD
Magburu onwe ya, enyere m ya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ee
Zaghachi ka blitzkrieg
Na Chromium m, nhọrọ ahụ abịakwute m na ndabara.
Gbanyụọ-Isiokwu: Ugbu a ha emeela ka nsogbu nke ịsụgharị ibe weebụ na Debian Chromium.
kedu nke kwalite iji kwalite na Chromium?
Na nsụgharị 29.
Ezigbo mma na oke zuru oke. Karịsịa n'ihi ndepụta nke ọtụtụ okwu mmejọ (ma ọ bụ ihe egwu). Na e nwere ọtụtụ ndị tụkwasịrị obi nke ukwuu na onye na - agụgharị ihe ma na - eche na ha ji ederede "ziri ezi".
Ma ebe ọ bụ na ị nọ na nke a, olee otu esi ede ụra ma ọ bụ ihi ụra ?????? biko oburu na obi oma dicha m
Na-ehi ụra ...
Ana m arahụ ụra
ị na-arahụ ụra
ọ na-ehi ụra
Amaghi m maka "why" na "why": O
Kedụ ka m ga - esi mepee sistem ederede nke pc m - ya na ihe ọzọ
Eiderm J. Chaves C. dijo
Ihe nkuzi dị egwu! Ekelere m gị maka iwepụta oge iji mee ya ma bipụta ya; ọ na-ejere m ozi ọtụtụ.
Zaghachi Eider J. Chaves C.
ị na-ahụ, m na-enwe nsogbu a nke ndị na-agbazi na mbadamba…. dị mwute ikwu na m na-enweghị echiche otú nwee otu. Agbalịrị m ibudata tinye-ons maka firefox mana ha anaghị arụ ọrụ ọfụma.
M ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ebe a dịka o kwere mee
You maraworị ndị Yapas niile mana enwere onye na-amaghị ihe na-emehie ihe ndị a na-adịghị ahụkebe dị ka ịsị hello na-enweghị h na ihe ndị ọzọ dị egwu, enwebeghị m nsụgharị okwu na nkwupụta okwu mana n'agbanyeghị agbanyeghị nzuzu ị nweghị ike ịmehie ihe ndị ahụ Chineke m D : dị ka yapa nọmba 1
Ezigbo okwu. Ide ederede nke ọma anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ... Ọ bụrụ na obodo gị enweghị usoro agụmakwụkwọ dị mma, ọ kachasị mma ịmụ naanị gị ... Ọ bụụrụ ndị ọzọ ihere ịhụ ụfọdụ ederede ... juputara na mmejọ ... N'ihe na-erughị otu afọ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike mụọ asụsụ ị na-eji nke ọma na ọ dị mkpa naanị inwe obi ụtọ banyere nhazi ya, mmalite ya, ojiji ... Ma ọ bụghị ihe ngọpụ, dịka ọmụmaatụ, ịghara iji c dị ka Spanish na Spain: ndị Canaries, Andalusians, Extremadurans, ọ bụghị ha na-akpọ ya dị ka ndị Castican, ma ha na-ede ya nke ọma ...
Nke a ga-agwa gị site na onye na-ede asụsụ abụọ zuru oke; onwe-akụziri ...
Gabriela ramirez dijo
WOW na-ekele gị nke ukwuu (=
Zaghachi Gabriela Ramirez
Nwanyị li dijo
Daalụ!!!!!! Nkọwa gị nyere m aka nke ukwuu !!! Cheers !!!!!! 🙂
Zaghachi Lady Li
Dixon Scola dijo
Daalụ maka enyemaka gị, ihe ịga nke ọma.
Zaghachi Dixon Scola
Esi hazie ma ọ bụ gbanwee akara ngosi Plank
Etu esi ejikwa egwu egwu anyị na ọdụ